Fanxoo irratti Xannacha -
Damee Boruu: Muddee 08, 2019
PM Abiy Ahmed met with Vision Ethiopia gathering at the Watergate Hotel in Washington, DC on July 27, 2018. A hijack for Qeerroo struggle was plotted, right here, and former President Mengistu Haile Mariam’s advisers assumed the role of confidant lead the effort.
Mootoni Habashaa dhufaa darban hammeenya himame hin dhumne Uummata Oromoo irran akka gahaa turan raga gahaatu jira. Kana malee qabeenya Oromiyaa saamuu fi barbadeessuu irra darbanii biyya mataa isaanii godhatanii har’a ifatti falmachaa jiru. Isa sanyii Oromoo duguganii balleessanii fi qabeenya uummata Oromoo barbadeessaniif beenyaa baasuun hafee har’ a magaalonni akka Finfinnee fi kan hafan kan keenya jechuun isaanii amam akka Saba Oromoo irraa tuffii qaban agrsiisa. “Waan abbootni keenya humnaan abboti keessan irraa fudhatan nuyis humnaa hin eeganna nuun jechaa jiru”.
Motummaan EPRDF humna Habashaan haa dursamu malee seeraa biyya sana walitti qabee ittiin bulchu tolfatee jira. Mootumman EPRDF Waraana Wayyaaneen utubamee kan ture Oromiyaa saamuu fi ilmaan Oromoo fixxuun gahaa guddaa akka qabu beekna. Kanaafuu Uummatni Oromoo akka nama tokkotti harka wal qabatee Qeerroo fi Qarree Oromoo wajjin hiriira gallee waraana Wayyaannee qawwee malee harka qullaa hudduu qabee of irraa buqqisee kan darbe.
Yaroo qabsoon uummataa dhibaa dhufe Mootummaan EPRDF namtoonni gama uummataa goruu filatan argamuun akka EPRDF hudduun buqqisamee hin darbamne godhee jira. Hoogganton haaraan EPRDF keessa ol bahan uummata dhiifama gaafatanii biyyicha gara dimokraasii cee’sisuuf uummata irra imaanaa fudhatan. Adda duraan uummatni qabsoo Mootummaa EPRDF qabsoo gochaa ture Uummata Oromoo ti. Humni Uummata Oromoo Mootumma EPRDF cabsee buqqisee darbuuf humna gahaa akka qabu beekamaa dha. Habashoonni abshaalumman OPDOn bakka uummata Oromoo buutee aangoo biyya bulchuu akka fudhatu godhan. Diqaalota isaanii Uummata Oromoo keessatti hurursanii guddifatan aangoo itti ol baasanii huduu duuba dhokatanii of ijaaranii aangoo deefachuu akka qarqara gahanii jiran ni agarra. Waan kan Oromoo tahe hundaa balaalefachuu, abaaruu, xiqqeessuu fi balleessuu itti boba’anii jiru. Ilmaan Oromoo Yuniversitii naannoo biyyaa Amhaaraa jiran keessatti baratan ajjeessanii reefa tokko tokkoon nuuf ergaa jiru. Mana Waldaa isaanii keessatti qawwee, boobii fi rasaasa tulachaa jiru. Yaroo isaan qawwee hidhatanii hiriira bahan, kan keenya shimala iyyuu qabatee akka gabaa hin baane dhorkama. Hidhachuun isaaniif aadaa dha. Hiikachuun immoo nuuf akka aadaa tahu mootumman isaanii nu irratti fe’aa jira.
Garuu waan guddaan dagatamee warri aangoo maqaa OPDOn fudhatee ilmaan Oromoo utuu hin taane ilmaan nafxanyootaa fi Diqaalota Habashaa tahuu isaanii ifatti hubachuu dhabuu keenya. Afaan Oromoo waan dubbataniif qofa ilmaan Oromoo fakkaatanii uummatni keenya wareegam guddaan mirga xixxiqqoo argataa dhufe iyyuu harkaa butanii baleessuuf shira xaxxuu eegalan. Uummatni keenya hiree afaani isaan dubbachuu fi barachuu, biyyaa isaa irratti maqaaf illee taatu aangoo qabaachuu waan guddaa godhan harkaa balleessaa jiru. Fanxoo irratti Xannachi kana caalu jiraa?
Namicha hodhodhee(greedy) kana ilaala. Impaayeera Itoopiyaa waggaa shantama dura owwalama kaasee deebisuu ijaarse biyya bulchaa jiru diige kan waggaa kudhan bituuf kalaalate ijaaarsa haara labsataa jira. Waan of harkaa qabu facaasee bakka funaanatu dhabaa jira. Paartiin EPP waggaa kudhan dhufuuf biyya bulchan abjuu dha. Mee kana ilaala. Ajajan biyya bulcha immoo filmaatan? Yoo dimokraasiin jiraate filmaanni kan godhamu tahe abbaan mo’u hin beekamu. Yoo humnaan kan godhuuf deemu tahe sabni jilbeefatuuf hin jiru.
Waan Kononeel Abiyi gochaa jiruuf keessa OPDO Uummata Oromoo irraa balleessuu isaaf yaroo darbe galateefadheera. Inni garuu uummata Oromoo gargaaruuf hin goone. OPDOn qubee O Lama qabaachuun ishee gara Oromoo ishee dhiyyeessa jedhee ODP godhe. Aamas qubeen O tokko keessatti hafuun yaadaa fi hawwii Impaayeera Itoopiyaa ijaaruuf hin tahu jedhee ODP balleesse EPP godhe. Waan gochaa jiru kun seeraa ala. Akka OPDO diige EPRDFis diigee jira. Manni maree Impaayeera Itoophiyaa seera EPRDFiin filame. Gaafa EPRDF diigamekaase manni maree sunis wajjin diigamee Kononeel Abiyi hatattaman aangoo irraa ka’uun dirqama. Kun itti gaafatama uummata isaan filatee kan ilaalu taha.
Ilmaan nafxanyootaa fi Diqaalonni Habashaa ilmaan Oromoo OPDO keessa jiran dhiibanii baasanii EPP ijaaratanii jiru. EPPin bifa kamnuu Uummata Oromoo bakka hin butu. EPPin maqaa paartiin biyya Oromoo keessatti aangoo tokko illee qabaachuu hin dandeessu. Manni Caffee Oromoo seera EPRDFiin ijaarsa OPDOn filamee waan jiruuf OPDO wajjin diigamu yakaan presidantii Oromiyaa muddee hama filannoon dhufutti akka OPDOn hin facaanne ittisuu qaba. Yoo hawwii nama of jaalatu tokkoo guutuuf jecha waan hunduu seeraa ala kan hojjetamu tahe hunduu wal fudhatee dhidhima seenuuf deema. As irratti an jaala OPDO qabaadhee akka hin taane hubatamuun qaba.
Karaa koof an “Mooti Moota” Habashaa bara 1974 itti awaalee bira darbee haqa uummata koo utuu hin sharafamiin mirkaneessuuf qabsawwaan jira. Namichi Kononeel Abiyi jettan kun wagga shantama of duba deebee lafee mootota Habashaa bola keessaa baasee sidaa ijaaraaf jira. Qabeenyi biyyaa fi yaroon bade nama gadisiisa. Namoota milliyoona hedduun lakkawaman beelaa utuu akka balaa mukaraa harca’aa jiranii sammuu maliin yaadee kana akka hojjechaa jiru hin beeku. Yaada boodatti hafaa, bututaa fi dogongoraa akkasi takka argesi dhageessi hin beeku. Namoota Aangoota Itoophiyaa keessatti fudhatan isa wajji shanaffaa argeera. Nama gad aantii isa fakkaatu tokko hin agarre. Akkuma ijoollen keenya jedhan EPRDF EPP dha’uu irratti dhibamtee lamanuu wal fudhatanii du’anii jiru.
Waa’ee Epp kan nama yaadesseu hin jiru. Namichi kaleessa na argaa, na argaa jedhu, kunoo har’a na dhoksaa jechaa jira. Kitaabni ida’amuu isaa Oromiyaa keessatti daraa tahee jira. Habashoonni namicha qaanii hin beekne konkolaata Arabaaf oofuu fi dubartoota isaanii Arbaa geessu mataa itti baatanii faarsaa jiru. Obbo Lammaa Magarsaa waan akeeka ida’amuu Uummata Oromoo hundaa wajjin dhaabbate didee jiruuf Habashoonni hundi maqaa isaa xureessuuf iyyaa jiru. Obboo Lammaa baga gammadee! Baga Galam ilmaan Abbaa Gadaa itti deebitee Seenaa dhugaa qabeessa mirkaneesite! Abaarsii fi arbinni Habashootaa ilma Abbaa Gadaa faaruu ol aanaa dha. Uummatni Oromoo, Qeerroo fi Qarreen Oromoo Wayyaanee Oromiyaa irra darbe si wajjin jira. Harcaatu nafxanyaa fi Diqaalota Habashaaf harkaa fi gurra hin laatiin. Kaayyoon keeya kaayyoo bilisummaa WBOn utubame tahuu qaba. Deebinee dogogora biraa keessa galuu hin qabnu. Shira EZemaa fi EPPin xaxxaa jiraniin gowwomnee filmaata kijibaan Oromiyaa dabrsinee nafxanyootaa hin laanu.
Biyyi qawween qabe qawween qofa bilisooma. Qabsoonni Uummatni Oromoo gochaa jiru qabsoo WBOn gochaa jiru wajjin wal tumsuu qaba. Uummatni Oromoo akka sabaati hiree isaa kan mureefachuu danda’u yoo WBOn jiraate duwwaa dha. Warri amma har’a haqa kana hin hubannee fi fudhanne maloo dammaqaa. Bara baraan garbummaa jalatti gidiruun nu haa gahu. Uummatni Oromoo harcaatu nafxanyaa miti eenyuunuu of irraa darbuuf humnaa fi dandeetti gahaa qaba. Dogongora imaamata siyaasaa keenyaatu uummata keenyaa rakkina akka har’a argaa jiruuf saaxilaa jira.
← Sink or swim: unlocking the Nile impasse Freweini Mebrahtu was named the 2019 CNN Hero of the Year for designing a reusable menstrual pad →